Isimo Samanje Sokumaketha Okuqukethwe 2014 | Martech Zone
NgeSonto, ngoJuni 22, i-2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lapho ngithola i-infographic enjengale evela ku-LinkSmart, ipulatifomu yokukhuthaza okuqukethwe, ngihlala ngizwa kahle ngokubhala uCorporate Ukubhuloga kwamaDummies kanye nezeluleko ezingaphelelwa isikhathi ezinikeze izinkampani. Ngenkathi isahluko senjini yokusesha kungenzeka ukuthi sesiphelelwe yisikhathi, amanye amasu aqinile ngaphakathi kwencwadi. Ukubhuloga kwebhizinisi iyi-lynchpin yanoma yiliphi isu lokumaketha lokuqukethwe futhi likhule kakhulu unyaka nonyaka.
Siphila esikhathini lapho ukumakethwa kokuqukethwe mhlawumbe kuyinto ethakazelisa kakhulu futhi eyinkimbinkimbi kunazo zonke ezake zaba khona. Ngemidiya emisha yokushicilela nezindlela ezintsha zokufinyelela kubafundi abathuthuka nsuku zonke, thina njengabashicileli sidinga ukuhlala phezulu kwezindlela zokumaketha kokuqukethwe ukushayela abafundi abaningi kokuqukethwe kwethu okuyigugu.
Iqiniso ngukuthi uma inkampani yakho ifisa ukuthola ukwethenjwa, ukuxhumeka okungokomzwelo, ukutholwa nokugcinwa kwamakhasimende online, kufanele wakhe igunya futhi ube nesisekelo solwazi esitholakalela imikhondo namakhasimende ngokufanayo. Imboni iyaqhubeka nokuvela - ikhiqiza inqwaba yezikhundla ezintsha nesidingo esikhulu sababhali abakhulu, abaklami nabalobi bezindaba.
Tags: 2014okuqukethwe kokukhangisa infographiclinkmartisimo sokuqukethwe kokumaketha
Amamethrikhi ayi-14 wokugxila kuwo ngemikhankaso ye-Digital Marketing Campaign